Fitsaram-bahoaka :: Mihisatra ny famotorana ny raharaha tany Maroantsetra • AoRaha
Fitsaram-bahoaka Mihisatra ny famotorana ny raharaha tany Maroantsetra
Ny Fampanoavana any Toamasina no misahana ny fanadihadiana tamin’ny raha­raha niseho, tany Maroan­tsetra, izay nahafaty tovolahy notazonin’ny polisy sy ny hetsika nataon’ny olona niafara tamin’ ny famoizana ain’olona sy fandorana trano.
Tapa-bolana aty aoriana, milaza ho tsy mbola manam-baovao momba ny famotorana ny eo anivon’ny Fampanoavana. Tsy nahenoana akony ny momba an’ireo polisy mety ho efa nohenoina sy nantsoina. Nambaran’ny loha­ranom-baovao iray eo anivon’io Fitsarana ambaratonga voalohany any Toama­sina io fa: «efa voaray avokoa ny fitarainana rehetra tamin’ iny raharaha iny. Ho hita eo ny tohiny».
Etsy an-kilany, miandry ny tatitry ny fanadihadiana ny Polisim-pirenena. «Aorian’ny famotorana ataon’ny Fitsa­rana no hahafantarana ny fepetra horaisina, toy ny sazy homena an’izay polisy voasaringotra tamin’iny raharaha iny», hoy ny avy amin’ny Polisim-pirenena. Tsiahivina fa nahatezitra ny olona tany Maroantsetra ny fahafatesan’ilay tovolahy, 19 taona, voatazona tao amin’ ny fonjakelin’ny polisy, tany an-toerana, ny sabotsy 6 avri­ly lasa teo. Tonga maro nano­loana ny biraon’ny kaomisaria ny olona. Nitifitra ny polisy ka tovolahy iray no namoy ny ainy. Nihamafy ny hatezeran’ ireo mpanao fihetsiketsehana. Nodoran’izy ireo ny tranon’ ireo polisy teo an-tanàna. Trano roa amby roapolo no ravan’ny afo, tamin’izany.
Nisy minisitra vitsivitsy nidina tany an-toerana nijery akaiky ny toe-draharaha, tamin’io fotoana io. Nafindra toerana avy hatrany ary noso­loina avokoa ny polisy rehetra tany Maroantsetra. Milamina ny raharaha, taorian’izay.
Vono olona :: Kandidà depiote iray naiditra am-ponja